Lix Musharrax oo Khudbadahooda Kahor Jeediyey Xildhibaannada Golaha Shacabka - Halbeeg News
Lix Musharrax oo Khudbadahooda Kahor Jeediyey Xildhibaannada Golaha Shacabka
Lix ka mid ah musharraxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah waxay xildhibaannada golahan ka hor jeediyeen khudbadahooda.
Xildhibaannadan oo hadalkooda meelaha qaar ka wada sinnaa ayaa sheegay in ay sameyn doonaan isbedallo buuxa, isku keenidda golaha iyo arrimo kale oo muhiim ah.
1- Xildhibaan C/casiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen)
Ugu horreyn xildhibaan C/casiis ayaa sheegay in uu yahay shaqsi saaxiib la ah xildhibaannada golaha shacabka, haddii xilka guddoomiyaha golaha shacabka loo doortana wuxuu ballanqaaday in xildhibaannada uu la wadaagi doono howl maalmeedka golaha.
Waxa uu sheegay haddii ay xildhibaannada doortaan inuu ballanqaadayo in goluhu ku guuleysto inuu salka u dhigo, tusmeeyo tubta wax ku oolka ah ee xilliga kala guurka ah.
“Waxaan mudanayaal idiin ballanqaadayaa in haddii aad I doorataan uu baarlamaankan ku guuleysan doono inuu sal dhigtoo oo aan tusmeeyo tubta wax ku oolka ah ee xilliga kala guurka loo baahan yahay, taasi oo sifo sharciyad ku dhisan oo aan afduub ahayn, haddii aan taas sameyno waxaan hubaa in taariikhda ku xusnaan doonno” ayuu yiri xildhibaanka.
Musharrax Xildhibaan C/casiis oo hadalkiisa sii wata ayaa soo hadal qaaday la xisaabtanka xukuumadda iyo hay’adaha dowladda, wuxuuna yiri.
“Waxaan qabaa haddaad i ogolaataan inaan dhaqan cusub kusoo kordhinno la xisaabtanka xukuumadda oo mas’uuliyadda iyo xisaabtanka lagu ekeysiiyo hay’ad iyo qof”
2- Musharrax Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe )
Aadan Madoobe oo isna ka mid ah musharraxiinta u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ayaa khudbaddii uu ka jeediyey xarunta golahan waxa uu ku dheeraaday ka hadalka wax yaabihii uu soo qabtay markii uu ahaa guddoomiyaha baarlamaankii 8-aad.
Waxa uu sidoo kale rajo wanaagsan ka muujiyey inuu hoggaamin karo golaha shacabka, maadaama uu horey usoo hoggaamiyey baarlamaan xildhibaannadiisu gaarayeen 500 mudda Saddex Sano iyo bar ah.
“ Aniga waxaan uga bedal nahay musharraxiinta kale ee saaxiibadeyda ah, in aan soo hoggaamiyey baarlamaanka 3 sano iyo 6 bilood oo tiro ahaan kan hadda [baarlaamnaka 10-aad] jooga ka badnaa, duruuf ahaanna ay ka adkaayeen, anigoo wax badan ka soo bartay hadane aan is leeyahay waxaad sixi kartaa wax yaabihii waagaasi lasoo il duufay ama la gaari waayey, maadaama aan leeyahay khibradda baarlamaanka muddo aan ka yareyn 14 sano”, ayuu yiri Aadan Madoobe, isaga oo ugu dambeyn xildhibaannada golaha shacabka ka dalbaday in ay doortaan.
3- Musharrax Xildhibaan Saalim Caliyow Ibrow
Saalim ayaa sheegay in uu yahay shaqsi siyaasadda Soomaaliya kusoo dhex jiray 45-sano, lehna waayo aragnimo iyo khibrad shaqo, uuna qaban karo xilka guddoomiyaha golaha shacabka.
Waxa uu ku dheeraaday ka hadalka taariikhdiisa gaarka ah, shaqooyinkii uu soo qabtay iyo howlihii uu ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray.
Ibrow ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono dhismaha maxkamadda Dastuuriga, dhammeystirka iyo qabyo tiridda Dastuurka KMG ah, dhisidda guddiga adeegga baarlamaanka, xoojinta iyo ka warqabidda xiriirka baarlamaannada dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, kor u qaadista iyo tayeynta howlwadeennada golaha shacabka iyo xoojinta isku xirka baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo kuwa caalamka.
Ugu dambeyn, musharrax Saalim Caliyow Ibrow ayaa ka codsaday xildhibaannada golaha shacabka in ay codka siiyaan.
4- Musharrax Xildhibaan Cali Sheekh Maxamed Nuur
Musharrax Cali oo isna ka mid ah ahaa mudanayaasha maanta khudbadahooda ka jeediyey golaha shacabka ayaa dhankiisa sheegay khibraddiisa iyo waxyaabaha uu qaban doono haddii uu xilkaan ku guuleysto.
Waxa uu tilmaamay in shaqsi ahaan uu howlaha baarlamaanka kusoo dhex jiray muddo 14 sano ah, sidoo kalena haddii codka la siiyo uu wax ka qabanayo geedi socodka Dastuurka, sugidda amniga, xoojinta iyo horumarinta midnimada shacbiga Soomaaliyeed iyo dib u heshiisiinta iyo nabadeynta bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha, horumarinta adeegga bulshada iyo arrimo kale oo muhiim ah.
Xildhibaan Cali Sheekh ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in uu ka howlgeli doono arrimaha wadahadalka dowladda federaalka iyo Somaliland , waxaana uu yiri.
“Waa lagama maarmaan ka howlgelidda midnimada umaddeena iyo wadajirka dalkeenna la siiyo mudnaanta Koowaad oo ay ugu horreyso dib usoo nooleynta wadahadalka gobollada W/galbeed Soomaaliya ee Somaliland oo la guda galayo loogana gun gaarayo si ay ku jirto daacadnimo, wadaninimo, iyo midnimo Jaceyl”
Ugu dambeyn, xildhibaan Cali ayaa sheegay in isagu aanay jirin cid si gaar ah u wadata oo jeebkiisa uu ku jiro, waxa uu sidoo kale tilmaamay in aanay jirin hay’ad ka tirsan dowladda federaalka oo si gaar ah isaga u wadata, wuxuuna xildhibaannada ka codsaday in ay codka kalsoonida siiyaan.
5- Musharrax Xildhibaan Isaaq Ibraahim Yarow
Wuxuu sheegay Musharraxan in haddii la doorto uu noqon doono guddoomiye dhex dhexaad ah, mideeye ah, ilaaliyana shuruucda golaha shacabka iyo xeer-hoosaadka u yaalla.
“Haddii aad i doorataan oo codkiina aad i siisaan waxaan idiin xaqiijinayaa in aan noqdo guddoomiye mideeye ah, madaxbannaan, isku kalsoon, dhex-dhexaad ka ah afkaaraha ay ku kala duwanaan karaan xubnaha golaha shacabka” ayuu yiri Musharrax Yarow.
Sidoo kale, musharraxan oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Waxaan xoogga saari doonaa dardargelinta waajibaadka iyo awoodaha golaha shacabka oo ay ugu horreeyaan matalaadda dhammaan shacabka Soomaaliyeed, la xisaabtanka iyo sharci dejinta, kor joogteynta hay’adaha fulinta kuwaas oo ku saleysan nidaamka isu-dheelitirka awoodaha dowladda”
musharrax Isaaq Ibraahim Yarow ayaa sheegay in uu ilaalin doono xasaanadda xildhibaannada golaha shacabka, lana shaqeyn doono.Wuxuu xildhibaannada ka dalbaday iney codkooda siiyaan si uu u noqdo guddoomiyaha golaha shacabka.
6- Musharax Xil. Idiris Cabdi Dhakhtar
Musharaxan isu soo taagay xilka guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu sheegay in uu yahay hogaamiye raba in shacabka Soomaaliyeed ay ku noolaadaan nolol wanaagsan oo la mid nolosha shucuubta kale ee caalamka ay ku nool yihiin.
Idiris ayaa tibaaxay sababta uu xilkan iskuugu soo taagay ay tahay sidii dadka iyo dalka Soomaaliyeed uu u samatabixin lahaa oo ay u helaan hogaan caddaaladda ku dhaqa.
“Waxaan xilkan iskuugu soo taagay in aan noqdo afhayeenka golaha baarlamaanka Federaalka Soomaaliya waxay tahay baahida shacabka Soomaaliyeed u qabo in uu helo hogaan umadeed oo u cadaalad fala kana gudbiya marxaladdan aadka u dhibka badan ee uu shacabka Soomaaliyeed ku jiro loogana saari lahaa kalsoonida darrida ay dowladooda ka qabaan”, ayuu yiri Idirs Cabdi.
Musharax Idiris Cabdi Dhakhtar ayaa markii labaad isu soo taagay qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka intii uu ka tirsanaa xildhibaannada baarlamaanka dowladda Soomaaliya.
Khamiista berri ah ayaa la filayaa in khudbadahooda ay jeediyeen 5 musharrax oo haray, kuwaasi oo ka mid ah 11-ka musharrax ee u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
YAA DILAY? MAXAASE LOO DILAY?
Xulka Soomaliya oo u Soo Gudbay Finalka Koobka Bariga iyo Bartamaha